Milixda Guérande oo leh madow madow | Black Périgord gawaadhida waaweyn ee sanduuqa loogu talagalay VIP - VIP truffles.
Kaaliyaha ugu fiican, qiimo jaban, in lagu rido dambiisha si kor loogu qaado suxuuntaada ama aperitif-kaaga!
Halkan ka hel dhammaan sixirka dhabta dhabta ah ee madow, Tuber Mélanosporum! Waa truffle dhif ah oo leh caraf khiyaano iyo dhadhan fiican ah oo qurxinaysa cunno kasta oo lala xiriirayo.
Gawaarida madow waa kuwo dhadhan fiican leh. Waxay leedahay dhadhan yar oo basbaas leh iyo ur wanaagsan oo keena humus, dhul kaymo qoyan ah iyo miro la qalajiyey oo la shiilay.
Badeecad udgoon oo qaali ah, taraafikada madow waxay ku wanaajisaa suxuuntaada warqad sharaf leh oo la safeeyey.
Kulan qurux badan oo u dhexeeya badda iyo berriga, tan cusbo dhaanto madow oo ka kooban jaangooyooyin si xirfadaysan isku dhafan, waxay siineysaa jajab, omelet, miisasyo iyo dhammaan kalluunka la dubay dhadhan iyo udgoon aan caadi ahayn. Milixdan dhadhanka ah sidoo kale waxay dareemi doontaa farmaajo farmaajo cusub, baradhada la shiiday ama si fudud ukunta la kariyey.
Adeegsiga talo: ku dar cusbo dhaanto madow dhamaadka karinta si looga fogaado luminta udgoonkeeda.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: cusbo, dhaanto madow Tuber Melanosporum 3%